सुन तस्कर ‘गोरे’ ले मृत्यु अघि सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर दिएको यातना !(भिडियोसहित) – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / सुन तस्कर ‘गोरे’ ले मृत्यु अघि सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर दिएको यातना !(भिडियोसहित)
सुन तस्कर ‘गोरे’ ले मृत्यु अघि सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर दिएको यातना !(भिडियोसहित)
Anurag Post May 17, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, भिडियो, राजनीति, व्यापार Leaveacomment 218 Views
२ करोड ६० लाख ६३ हजार नक्कली नोट प्रकरणमा दोषी को-को ?
काठमाडौं । कुनै समयमा निकै चर्चा पाएको नेपाली फिल्म ‘लुट’ का निर्माता नै अहिले २ करोड ६० लाख नक्कली नोट छपाएर लुटिरहेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।
बुधबार काठमाडौ गोंगबु, बागबजार तथा ललितपुरको धापाखेलबाट लुटका निर्माता माधवराज वाग्लेसहितको टोलीबाट २ करोड ६० लाख ६३ हजारका नेपाली नक्कली नोट फेला पारेको छ ।
वाग्लेसहित छापाखाना सञ्चालकद्वय प्रकाश सुवेदी र विकेश नापित, सुर्खेतका महेन्द्र बोगटी, सिन्धुलीका सुजित तामाङ र साजन तामाङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बागबजारस्थित नवज्योति प्रिन्टिङ प्रेस र जय भोलेबाबा प्रिन्टिङ प्रेसमा नक्कली नोट छाप्ने गरीएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर पक्राउ परेका वाग्लले चलचित्रका लागि नक्कली नोट छापीएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसै बिषयलाई लिएर नेपाल चलचित्र निर्माता संघले फिल्मका लागि नोट छापिएको दाबी गर्दै वाग्लेलाई बदनाम गर्न खोजीएको आरोप लगाएका छन् । संघले विज्ञप्ति निकाल्दै माधव राज वाग्लेलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ ।
फिल्मका लागि छापिएका नक्कली नोटमा नक्कली नोट उल्लेख गर्नु पर्ने भएपनि उतm नोटमा भने कतै नक्कली नोट उल्लेख गरिएको छैन । प्रहरीले भने नक्कली नोट उनीहरुले होटल, रेष्टुरेन्टको बिल तिर्न, यौनकर्मीलाई दिने, जुवा खेल्ने, लागू औषध किन्न प्रयोग गरेका जनाएको छ । राष्ट्रबैंका अनुसार कसैले पनि नक्कली नोट छाप्न पाउदैन् ।
निर्माण कम्पनीको ६ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अस्पताल बनेन
धौलागिरी अञ्चल अस्पताल निर्माणका लागि १० बर्षमा ६ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सकिएको छैन । अस्पतालको ओपीडी र बिषेशज्ञ कक्ष रहने बि बल्क २ बर्षमा हस्तान्तरण गर्ने गरी २०६६ साल बैशाख ६ गते ६ करोड ६० लाखमा निमार्ण सम्झौता भएको थियो ।
भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत मिलिनियम विल्र्डससहित आषिश निर्माण सेवा भरतपुर, भिम ज्योती प्रा.ली. भरतपुर, जय बाबा गोरख कन्स्ट्रक्शन धादिङ र नयाँबाटो निर्माण सेवा कास्कीले जिम्मा लिएको योजनामा अहिले सम्म ६ करोड ३२ लाख बढी रकम भुतmानी भैसकेको छ तर काम भने अझै सम्पन्न भएको छैन ।
भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले कार्वाही गर्नुको सट्टा ६ पटक सम्म म्याद थप गरेको छ भने ५ प्रतिशत मात्रै रकम रोकेको छ । तर निर्माण कम्पनीले फेरी म्याद थप खोजीरहेको छ ।
भवन डिभिजन कार्यालयले चाहेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई कालो सचीमा राखेर म्याद सकिएको अवधिबाट प्रति दिन ०.१५ प्रतिशतका दरले हजान तिराउन सक्ने काुननी व्यवस्था छ ।
तर भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङ भने अर्को निर्माण कम्पनीलाई दिदाँ थप खर्चिलो हुने भन्दै पुरानै निर्माण कम्पनीको म्याद थप्ने पक्षमा देखिन्छ ।
बि बल्क मात्रै होइन सि बल्क पनि २०७३ सालमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १० करोडमा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न भैसकेको छैन ।
भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङ र निर्माण कम्पनीबीचको सेटिङकै कारण भवन निर्माण सुस्त देख्दा अधकल्चा भवन हेरेर बस्नुको विकल्प नभएको अस्पताल विकास समितिको गुनासो रहेको छ ।
अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न होला र गुणस्तरीय सेवा पाउने आशमा बसेका स्थानीयहरु अस्पतालको यो अवस्था देख्दा दिक्क छन् ।
न्याय खोज्दै दलालहरुले फसाएर कतार पु¥याइएका युवक
काठमाडौं । बिदेश गएर केही पैसा कमाई परिवार पाल्ने सपना देखेका पाल्पाका रमेश राना आफ्नो सपना पुरा गर्न काठमाडांै आए । महाराजगञ्जमा रहेको जनशक्ति मेनपावरमा पुगे ।
उनलाई जनशक्ती मेनपावरकी धनकान्तिी घिमिरेले कतार पठाउने भन्दै सामाखुसीमा रहेको एस.एन एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लीमा पु¥याए । ट्रेनिङ सेन्टरका एक जना सञ्चाल रजिम मियां र धनकान्ती घिमिरे गांउबाट ब्याजमा ल्याएको १ लाख ५५ हजार रुपयां तिरेर उनी कतार उडे । तर कतारमा भनेजस्तो काम नमिलनेपछि उनी ५ दिनमै नेपाल फर्के ।
नेपाल आएर उनले धनलक्ष्मी घिमिरेलाई फोन गरे । धनकान्ती र उनका श्रीमान डिबी घिमिरेले दुई महिना सम्म पैसा दिन्छु भनि झुलाए । दुई पटक सम्म त्यही पैसामा विदेश पठाईदिन्छु भनि काठमाडौं पनि बोलाए । तर धोका मात्र दिईरहे ।
अहिले खोज्दै जाँदा रमेशलाई त सब ईन्टरनेश्नल ह्युमन रिसोर्स नामक मेनपावरले बिदेश पठाएको रहेछ । हामीले खोज्दा जनशक्ति मेनपावरकी धनकान्ती आफुले ३५ हजार रुपैयाँ मात्र लिएको बताउँछिन् भने एस.एन एकेडमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लीमा रजिम मिंया आफुले ४० हजार रुपैयाँ मात्र लिएको भन्दै आफुहरुले त्यो पैसा फिर्ता गर्ने बताउँछन् ।
फ्रि भिषा फ्रि टिकटका लागि १ लाख ५५ हजार रुपैया लिनेहरु अहिले ७० हजार मात्र फिर्ता दिने बताईरहेका छन् । तर पीडितले भने आफ्नो लगानी गरेको सबै पैसा फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित बैदेशिक रोजगारी बिभागमा मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।
ब्याजमा लिएको १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उठाउन रमेशको धेरै पैसा खर्च भईसक्यो । दलालहरुकै कारण अब त उनको विदेश जाने रहर पनि पुगिसक्यो । श्रीमतीसँग मिलेर नेपालमै केही गर्ने बताउछन् उनी ।
Previous स्थापनाको ६९ बर्षको इतिहासपछि जुट्दै फुट्दै जन्मियो देशकै विशाल कम्युनिष्ट पार्टी
Next आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ०४ गते शुक्रबार